Wargeyska Afka Dheer Ee The Gaurdian Oo Warbixin Ka Qoray Somaliland - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Wargeyska Afka Dheer Ee The Gaurdian Oo Warbixin Ka Qoray Somaliland
Wargeyska Afka Dheer Ee The Gaurdian Oo Warbixin Ka Qoray Somaliland
Wargeyska caanka ah ee The Gaurdian ayaa warbixin dheer oo dhinacyo badan taabanaysa ka qoray qaddiyadda madax bannaanida Somaliland iyo xaqiiqada dawladnimada ka jirta. Warbixinta oo ciwaankeeda lagu suntay dood ku saabsan sida Qaran jiraa aanu u ahayn mid jira iyada oo looga jeedo Qaran leh shuruudaha Qaran looga baahan yahay laakiin, aanay cidna aqoonsanayn waxa si weyn loogu lafo guray doodda Somaliland aqoonsiga ku raadinayso, aragtida dadka ka soo horjeeda, kala duwanaanshaha taariikheed ee Somaliland iyo Somalia iyo xaaladda dhaqan dhaqaale ee Somaliland xilligan ku sugan tahay.
Wariyaha Gaurdian ee Hargeysa yimid wuxuu sheegay in uu madaarka ka dareemay astaamaha muujinaya in Somaliland tahay Qaran Madax Bannaan waxaanu magaalada Hargeysa ku sheegay mid ka mid ah magaalooyinka ugu amniga badan caasimadaha Afrika. Waxa uu sheegay in xilli kasta aad si nabad ah u dhexmari karto magaalada.
Isaga oo ka qiyaas qaadanaya xaqiiqada uu ku arkay Somaliland wuxuu sheegay in digniinta waaxda arrimaha dibadda ee ah in aan Somalia oo Somaliland ku jirto loo socdaalin tahay mid aan xaqiiq ku salaysnayn, islamarkaana Somaliland aan wax falal argagixiso ah lagu arag ilaa 2008 iyo 2004 oo dilal ajaanib iyo Qaraxyo ka dhaceen.
Drs Adna Aadan Ismaaciil oo wargeysku ku sheegay qofka ugu caansan Somaliland ayuu ku dheeraaday sida ay ugu halganto aqoonsi helista Somaliland. Wuxuu sheegay in ay siisay kaadhkeeda lagala soo xidhiidho(Business card) oo ay xagga dambe kaga qortay ‘Xaggee Somaliland ku taalla?’ kadibna falaadhi tilmaamayso halka ay Maamka kaga taal Somaliland.
Iyada oo arrintaasi ka hadlaysa waxay sheegtay in marka ay dadyowga dunida la kulanto aanay u wada sharrixin Karin ama aanay dadkaasi iman Karin Somaliland maaddaama dawladahoodu uga digaan waxaanay wariyaha waydiisay sida uu uga soo baxsaday shabaqa ah digniinta dawladuhu dadkooda ugu sheegaan in aan loo socdaalin Somalia oo Somaliland ku jirto.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr Sacad Cali Shire wuxuu wargeyska u sheegay in hay’addaha caalamiga ah sida Qaramada Midoobay iyo waddamada uu bookhda ula macaamilaan sidii wasiir arrimo dibadeed oo dal la aqoonsan yahay ka socda haddana wali dunidu ka cago jiidayso aqoonsiga Somaliland.
Wargeysku wuxuu iftiimiyay in hay’addaha ay leeyihiin dawladaha Carbeed iyo kuwa Afrika sida Midawga Afrika iyo Ururka Jaamacadda Carabtu aanay ogolayn aqoonsi dawlad cusub iyaga oo ka cabsi qaba in jid cusub ku furmo oo aqoonsi raadis iyo gooni u goosad ah.